ASKfm အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.78.1 for Android
4.1 | 50,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（67.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် ASKfm - Ask Me Anonymous Questions
မေးရန်အချိန်! Askfm ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသင်၏ပထမဆုံးမေးခွန်းကိုယခုအချိန်တွင်မေးပါ။
သင်ရှည်လျားပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ထားသည့်ဆက်သွယ်ရေးကိုလွဲချော်ပြီလား ဒီတစ်ခါလည်းသင်သေးငယ်တဲ့ဟောပြောချက်ကိုရှာဖွေနေ? Askfm တွင် chats များကိုစစ်ဆေးပါ။
ကိုချက်ချင်းစကားပြောပါ။ အမည်မသိနေပါသို့မဟုတ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ။ သင်၌ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သင့်မေးခွန်းကိုသင်မေးပါက, ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်အဖြေအောက်သို့ချက်ချင်းပေါ်လာလိမ့်မည်။ မည်သူမဆိုချက်တင် ဆက်သွယ်. ဆွေးနွေးမှုကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်သည်။ Askfm တွင် chat ကြည့်ရအောင်။
Secret Askfm အက်ပလီကေးရှင်းမှာဝှက်ထားတဲ့အရာကဘာလဲ။
မေးခွန်းထုတ်စရာ - မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ! အမည်မသိမေးခွန်းများမေးပါသို့မဟုတ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလုပ်ပါ, လူ 40 ကျော်သည်သင်၏မေးခွန်းများကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပြီ။ သင်၏ Crush ၏ပရိုဖိုင်းကိုရှာပါ။ အမည်မသိမျက်နှာဖုံးနောက်ကွယ်မှပွတ်ဆွဲပါ။ ပွတ်ဆွဲပါ, တစ်ခုခုမေးပါ။ Shoutout မှတစ်ဆင့်လူများကိုပတ်0န်းကျင်ရှိလူများကိုမေးမြန်းပြီးအနီးအနားရှိသူစိမ်းများကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေများ, အတန်းဖော်များသို့မဟုတ်သူစိမ်းများမှမေးခွန်းများကိုဖြေပါ။ သင်ရိုးသားရန်, ရိုးသားရန်, သင်၏အဖြေများကိုဓာတ်ပုံများ, ဗွီဒီယိုများသို့မဟုတ် gif များကိုထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုပိုမိုတောက်ပစေပါ။ သင်ထင်သည်ထက်သင်ပိုမိုဖန်တီးမှုရှိသည်!
Askfm ဒင်္ဂါးပြားများအတွက်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ Collect Collects Askfm Market တွင်အထူးကမ်းလှမ်းမှုများအတွက်သူတို့ကိုသုံးစွဲရန်ဒင်္ဂါးများကိုတောင်းပါ။ သင်၏အဖြေများအတွက်ဒင်္ဂါးများကို0င်ရောက်နိုင်လျှင်မည်သူသည်ကြိုက်နှစ်သက်သနည်း။ အချို့သောအဖြေများကသာမန်ကဲ့သို့များစွာရထိုက်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏နောက်လိုက်များသည်သင်၏အကောင်းဆုံးအဖြေများကိုမြှင့်တင်ရန်ဒင်္ဂါးများကိုလည်းရနိုင်သည်။ အဘယ်သူသည်မည်သူရရှိသည်ကိုစစ်ဆေးပြီးအပတ်စဉ်ဒင်္ဂါးပြားပြိုင်ပွဲတွင်သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုစိန်ခေါ်ပါ။
အစောပိုင်းသို့မဟုတ်အထူးအသွင်အပြင်များ, နောက်ခံနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးများကိုစောစီးစွာသို့မဟုတ်ပင်သီးသန့်ရယူရန်ပင် VIP ပရိုဂရမ်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏အဖြေသည်စိတ်0င်စားဖွယ်မျှသာမဟုတ်ပါဟုယုံကြည်ပါသလား။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်နှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရားကိုသိလိုသည့်အခါအချိန်တိုင်းတွင်ပရီမီယံအင်္ဂါရပ်နှင့်အဖြေရှာပါ။ VIP ပရိုဂရမ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းကိုမိတ်ဖက်များ [email protected] မှတဆင့်ရေးပါ။
သို့သော်အချို့သောသံသယများရှိပါသလား။ ဒီဟာကိုရွေးလိုပါသလား။ GTUS TAB ကိုစစ်ဆေးပြီးသင်၏အသံကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများသို့ဖွင့်ပါသို့မဟုတ်အခြားသူများ၏အတွေးများကိုကြားရန်သင်၏ဓာတ်ပုံကိုဖန်တီးပါ။ သူငယ်ချင်းအသစ်များ, ပတ်0န်းကျင်သို့မဟုတ်သင်၏အတန်းဖော်များကိုမေး။ သင်အီးမေးလ်, Facebook သို့မဟုတ် Vkontakte မှတစ်ဆင့်ဆိုင်းအင်လုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ campyfmous ၏မိတ္တူကိုရယူပါ။ ထိပ်တန်းအမည်မသိ app - ပတ်0န်းကျင်တွင်အနက်ရှိုင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်။ အမည်မသိမေးခွန်းများကိုမေးပါသို့မဟုတ်အနီးအနားရှိသင်၏မိတ်ဆွေများ, အတန်းဖော်များသို့မဟုတ်လူတို့ထံမှမေးခွန်းများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုပါ။ quefm တွင် Q & A မှအဆုံးမဲ့လောကသို့ငုပ်ပါ။
.com / as askfmpage
tiktok - https://www.tiktok.com/@kasfm
ဘာအသစ်လဲ ASKfm - Ask Me Anonymous Questions 4.78.1
Using ask.fm for first time
Ketika Anonymous Bertanya | askfm
ASKfm - Ask Me Anonymous Questions 4.76.1
ASKfm - Ask Me Anonymous Questions 4.75
အော်တို စ္ရောပ္ပေရ္ - အော်တို ဋပ္ပေရ္